Ngwa ụlọ ọrụ - Guangdong Xinzhihui Packaging Technology Co. Ltd.
Ndị bịara ọhụrụ na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa, ihe ngosi ngwa ngwa nke ihe nkiri na-asọ oyi
Mpaghara ngwa a chọrọ nghọta dị elu, ike na-agbanye ike, ike dị elu na ihe ndị ọzọ; A na-eji 35% nke ihe nkiri gbatịrị agbatị na pallets nkwakọ ngwaahịa dị arọ, akụkụ a chọrọ ike ijigide na nkwụsi ike pallet, ma nwee ụfọdụ anụ ahụ. Arụ ọrụ: 40% nke ihe nkiri gbatia na-eji dị ka uzuzu na mmiri ozuzo mkpuchi maka ihe owuwu ụlọ brik. Ala a chọrọ mgbapu elu na nguzogide adọka. Ihe nkiri eserese abanyela n'ime ụlọ na nnukwu akpa nkwakọ ngwaahịa na Europe na United States kachasị, a na-atụ anya na isi uto ga-abụ nri, ihe ọverageụverageụ na ngwongwo ọcha.
N'ihi uru nke uzo na ire ụtọ, arụmọrụ siri ike, ikuku siri ike na nrapado onwe ya, a na-ahụta ihe nkiri ahụ dị ka ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa dị mma site na ụlọ ọrụ nke ibu ibu, nchekwa na njem, ntinye igwe na ibutu. Mgbatị ihe nkiri na-agbatị na-adaba adaba, ngwa ngwa, mgbapụta dị elu na nkwụsị anya mmiri, obere mmasị, ma na-arụ ọrụ nke uzuzu uzuzu, mmiri na-egosi, nla nla, ida na nkwakọ ngwaahịa.
Nke mbu, ihe nkiri a na-agbatị dị mfe maka nchekwa nke ihe, ọ dịkwa ezigbo mma maka ịnyefe, na-ebudata na ibudata ihe mgbe ha na-abanye n'ụlọ nkwakọba ihe, ọ na-enyekwa ọnọdụ maka ọrụ nchekwa.
Nke abuo, ojiji nke ihe nkiri na-agbatị nwekwara ike izere mmebi na nrụrụ nke ihe ma belata mmetụta nke njem na njikọ ndị ọzọ.
Nke atọ, ọ nwekwara ike izere mgbanwe mgbanwe kemịkal na ihe. Ruo n'ókè ụfọdụ, nkwakọ ngwaahịa ihe nwere mmetụta nke ịhapụ mmiri, mmiri, ọkụ na gas dị iche iche na-emerụ ahụ na ikuku.
Na mgbakwunye na akụkụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu, ihe nkiri a na-agbatị nwekwara ike ijikwa nnweta ahụ, belata ọnụ ahịa mgbasa yana uru nkwakọ ngwaahịa, ọ dịkwa mma maka njem ma melite ikike njem.
Ihe nkiri a na-esetị bụ otu n'ime ihe nkiri nkwakọ ngwaahịa akacha eji eme ihe, ọkachasị na ịchekwa ọhụrụ, nkwakọ ngwaahịa, njem, nchekwa na wdg. Ya mere, mgbe ndị na-emepụta zụrụ ihe nkiri gbatịa, ọnụ ọgụgụ nzụta adịkwaghị obere. A na-eji ihe nkiri gbatịrị agbatị na ebe nchekwa, e nwere ọtụtụ ụzọ nchekwa.
N'ọhịa nchekwa ụlọ nkwakọba ihe, mba ndị ọzọ na-ejikwa nkwakọ ihe nkiri pallet na-agbatị maka nchekwa akụkụ atọ na njem iji chekwaa ohere na ala. Formsdị isi eji eme ihe bụ: nkwakọ ngwaahịa akara, nkwakọ ngwaahịa zuru ezu, nchịkọta akwụkwọ ntuziaka.
Kinddị nkwakọ ngwaahịa a yiri nke nkwakọ ngwaahịa ihe nkiri ahụ, ihe nkiri ahụ dị na tray iji kechie tray ahụ, wee kpoo ọkụ ọkụ abụọ na-ekpo ọkụ na-ekpuchi isi abụọ nke ihe nkiri ahụ ọnụ. Nke a bụ ihe mbụ eji eji winding ihe nkiri, wee si otú ahụ mepụta ụdị nkwakọ ngwaahịa ndị ọzọ.
Ngwunye zuru oke
Packagingdị nkwakọ ngwaahịa a chọrọ ka obosara ihe nkiri ahụ zuru ezu iji kpuchie pallet ahụ, ọdịdị nke pallet na-adịkwa mgbe niile, ya mere ọ nwere uru nke ya na iji ya eme ihe, ọ dịkwa mma maka oke ihe nkiri nke 17-35 μ m。
Kinddị nkwakọ ngwaahịa a bụ ụdị ụdị ngwugwu ihe nkiri kachasị mfe. A na-etinye ihe nkiri na shelf ma ọ bụ aka, ma na-atụgharị ya na tray ma ọ bụ ihe nkiri ahụ na-agbagharị gburugburu tray ahụ. A na-ejikarị ya eme ihe na pallets mebiri emebi na pallets nkịtị. Kinddị nkwakọ ngwaahịa a adịghị nwayọ ma dabara maka ọkpụrụkpụ ihe nkiri nke 15-20 μ m。
Ihe nkiri a na-agbatị nwere echiche dị mma, na mgbakwunye na ịchekwa ngwaahịa ahụ, ọ nwekwara ike ịnye nsonaazụ ngosi ngwaahịa dị mma, ya mere ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ nwere ihu ọma. Tụkwasị na nke a, a na-eji teknụzụ nkwakọ ngwaahịa ihe oyi eme ihe iji wepụta ngwa ngwa ụlọ, enwere ike nyochaa koodu ahụ na fim ahụ iji zere ịda ma ọ bụ mebie n'azụ katọn ahụ.
Ihe ọ industryụ industryụ na ụlọ ọrụ canning
Ka ọ dị ugbu a, nnukwu mgbanwe ikike ngwaahịa (0.25 ~ 3.50L) ​​na ụlọ ọrụ ihe ọverageụverageụ nwere nnukwu ihe chọrọ maka nkwụsi ike nkwakọ ngwaahịa na arụmọrụ. Ọtụtụ uru nke eserese nkwakọ ihe nkiri na-eme ka teknụzụ a bụrụ ihe ngwọta kachasị mma maka nkwakọ ngwaahịa na ụlọ ọrụ ihe ọ theụverageụ ihe ọ .ụ .ụ.
Ngwa dị na ụlọ ọrụ na-ewu ihe na-ekpuchi ọtụtụ ngwaahịa, site na brik, taịlị na simenti, ihe ndị dị n'elu ụlọ na slurries ruo ala osisi na ogwe mgbidi. Shapesdị na nha nke ngwaahịa ndị a dịgasị iche iche nke ukwuu, ha nwekwara ọkwa dị elu maka mgbanwe mgbanwe. Tụkwasị na nke ahụ, ọchịchọ maka nkwakọ ngwaahịa dị ọnụ ala na usoro nkwakọ ngwaahịa na gburugburu ebe obibi emeela ka ndị mmadụ tinyekwuo uche na ike na oriri ihe. Ya mere, ụlọ ọrụ na-ewu ihe chọrọ ngwa ngwa nkwakọ ngwaahịa dị elu iji nye nkwụsi ike pallet na ọnụ ala.
Nkwakọ ngwaahịa na-ekpo ọkụ ọkụ abụwo nhọrọ mbụ maka nkwakọ ngwaahịa ngwaahịa, na ịgbatị ihe nkiri adịghị mkpa ka iwe ya mgbe ị na-ebu ngwongwo, ọ dịghịkwa mkpa iji ike, iji zere okpomọkụ a na-eme n'oge usoro nkwakọ ngwaahịa nke na-emetụta ngwaahịa kemịkal. .
Industrylọ ọrụ nri na-eji usoro nkwakọ ngwaahịa nke eserese eserese, nke nwere ike ịkwakọba ihe oriri n'otu n'otu na ihe nkiri aka uwe, tinye ya na nnukwu ụlọ ahịa, wee ree ya mgbe emepechara ihe nkiri ahụ. N'ihi na ọ dịghị mkpa ka ndị ọrụ tinye ngwaahịa, a na-echekwa ọtụtụ oge na mmefu. Ntanye ịse ihe nkiri nwere ike inye nkwụsi ike pallet ka ọ dị elu, nchekwa ibu na nsonaazụ ngwaahịa a.
Maka akwụkwọ idetuo na akwụkwọ mpịakọta, gbasaa ihe nkiri nwere ike iji ihe nkiri otu akwa maka nkwakọ ngwaahịa siri ike na ọnụ ahịa. Ejiri akụrụngwa na-agbanwe ihe nkiri na-arụ ọrụ akụrụngwa, nke nwere ike iji fim dị iche iche maka nkwakọ ngwaahịa.
Ntanye ihe nkiri eserese bu usoro nkwakọ ngwaahịa na nke nwere ike ịgbanwe nke nwere ike hụ na nchekwa na ntụkwasị obi nke ngwongwo ma nwekwara ike ịchekwa n'èzí. E jiri ya tụnyere usoro nkwakọ ngwaahịa ọdịnala, mmetụta a na-ahụ anya dị mma na arụmọrụ ọrụ dị elu. Ọ nwere mmetụta nkwakọ ngwaahịa na mmiri na-enweghị ntụ, ọ dịkwa mma maka ihe ndị e ji eriri na ihe nkiri ihe nkiri na-achọ nnukwu ịdị ọcha, ya mere a na-eji ya na nri, ihe ọverageụverageụ, ngwa ụlọ na ogige nkwakọ ngwaahịa ndị ọzọ.
Malite site na ngwa ngwa, ndị bụ isi bụ:1. Nkwakọ ngwaahịa nkwakọ ；2. Express nkwakọ ；3. packaginggbọ njem nkwakọ ；4. N'ihe banyere ụlọ ọrụ na-akpụ akpụ, ọrụ nkwakọ ngwaahịa nke ihe ndị a bụ:
1. 1. Mbukota mbukota:kechie ngwongwo na pallet iji mepụta otu iji gbochie ịtọpụ, ịda ada na nrụrụ n'oge ntụgharị ma ọ bụ njem na-arụ ọrụ arụ ọrụ na ụlọ ọrụ; ma kpọọ ọrụ nke mmiri na-adịghị ekpuchi, uzuzu uzuzu na mgbochi ohi.
2. Nkwado katọn: Jiri ihe nkiri gbatịrị agbasa dị ka ihe nkiri igbe iji chebe katọn ahụ pụọ na mmiri ozuzo na iji zere ịfufu ihe ndị na-ewepụghị ihe n’ime katọn ahụ mgbe ike pụtara n'ike gbawara katọn ahụ.
3. Machine ekpuchi: Enwere ike iji igwe na-ejighị ya rụọ ọrụ nke ọma na 2-3 nke ihe nkiri eserese iji gbochie igwe ahụ nchara nchara n'ihi oge nchekwa oke, ọ nwekwara ike rụọ ọrụ na mgbochi uzuzu.
4. Pụrụ iche yiri ngwaahịa nkwakọ:Mgbe ị na-akwakọ ngwaahịa ndị pụrụ iche pụrụ iche, ọ gaghị ekwe omume ịhazi ihe nkiri nkwakọ ngwaahịa Pee. N'oge a, gbasaa ihe nkiri nwere ike iji maka nkwakọ ngwaahịa, ọtụtụ akụkụ na nkwakọ ngwaahịa gburugburu na-enweghị njedebe nwụrụ anwụ, iji gboo mkpa nkwakọ ngwaahịa gị zuru oke.
5. Nchedo ihu ala:Ihe nkiri a gbatịrị agbatị nwere ezigbo njigide onwe ya, mana ọ gaghị etolite ihe fọdụrụ na ihe mkpuchi ahụ. Enwere ike icho ya n'elu ebe di nma dika iko, ihe ulo, ihe ndi ozo, ibo uzo na windo iji gbochie ihe ndi mmadu.